Fanny Lye Deliver’d (2019) - Channel Zone
Posted by Little Man, Released on July 10, 2020, More episodes Fanny Lye Deliver’d
Download Fanny Lye Deliver’d (2019), Watch Fanny Lye Deliver’d (2019), don't forget to click on the like and share button. Series Fanny Lye Deliver’d always updated at Channel Zone. Don't forget to watch other series updates.
Fanny Lye Deliver’d (2019)====================IMDb Rating – 6.1/10#Unicodeကျွန်တော် ဒီကား ကြည့်ပြီး သိလာရတာ နှစ်ခုဘဲရှိတယ် . တစ်ခုက ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး
အာဏာကိုအသုံးချတာရယ်။ သဘာဝဟာ သဘာဝအတိုင်းဘဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရယ်။ ဒီကားက၁၆၆၀ ဝန်းကျင်ကိုရိုက်ကူးထားတာ။ ကပ္ပတိန်ဂျွန်က ဘာသာရေးသမား။ မိန်းမနဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကလေးကိုလဲ ဘာသာရေးနဲ့ဘဲ လမ်းညွှန်ဆုံးမတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူတို့ လယ်ထဲစုံတွဲတစ်တွဲရောက်လာတယ်။ အင်္ကျီတွေတောင်မပါဘူး။ သူတို့ ဘယ်သူတွေလိုက်လို့ ထွက်ပြေးလာတာလဲ။ အဲဘက်ခေတ်မှာ sex ဆိုတာက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမရှိသေး။ အထူးသဖြင့် အဲလိုကိစ္စမျိုးကိုမိစ္ဆာအယူလိုသတ်မှတ်ကြတယ်။ အဲဘက်ခေတ် ခရစ်ယာန် ဘာသာရေးအယူအဆတွေ။ ပြီးတော့ဘာသာရေးခုတုံးလုပ် အာဏာသုံး သတ်ဖြတ်တာတွေ။ ယောကျ်ားမိန်းမ ခွဲခြားမှုတွေ ဒီကားမှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။Ps: ဘာသာပြန်သူက ခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့အတွက် အမှား လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ရင် နားလည်ပေးပါ။(ဒီကားရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Z Naing Z Nianh ပဲဖြစ်ပါတယ်။)#Zawgyiကြၽန္ေတာ္ ဒီကား ၾကည့္ၿပီး သိလာရတာ ႏွစ္ခုဘဲရွိတယ္ . တစ္ခုက ဘာသာေရးကို ခုတုံးလုပ္ၿပီးအာဏာကိုအသုံးခ်တာရယ္။ သဘာဝဟာ သဘာဝအတိုင္းဘဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာရယ္။ ဒီကားက၁၆၆၀ ဝန္းက်င္ကို႐ိုက္ကူးထားတာ။ ကပၸတိန္ဂြၽန္က ဘာသာေရးသမား။ မိန္းမနဲ႔ ကေလး တစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ကေလးကိုလဲ ဘာသာေရးနဲ႔ဘဲ လမ္းၫႊန္ဆုံးမတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ သူတို႔ လယ္ထဲစုံတြဲတစ္တြဲေရာက္လာတယ္။ အက်ႌေတြေတာင္မပါဘူး။ သူတို႔ ဘယ္သူေတြလိုက္လို႔ ထြက္ေျပးလာတာလဲ။ အဲဘက္ေခတ္မွာ sex ဆိုတာက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမရွိေသး။ အထူးသျဖင့္ အဲလိုကိစၥမ်ိဳးကိုမိစာၦအယူလိုသတ္မွတ္ၾကတယ္။ အဲဘက္ေခတ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးအယူအဆေတြ။ ၿပီးေတာ့ဘာသာေရးခုတုံးလုပ္ အာဏာသုံး သတ္ျဖတ္တာေတြ။ ေယာက်္ားမိန္းမ ခြဲျခားမႈေတြ ဒီကားမွာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။